FIDIRAN’NY CORONAVIRUS : Manararaotra mampiakatra vidin-javatra ny mpivarotra ao Bazarikely Antsiranana
Nanaitra ny vahoaka Malagasy rehetra ilay fanambaràna sy fampitam-baovao nataon’ny Filohan’ny Repoblika Andry Nirina Rajoelina, ny zoma 20 marsa hariva teo momba ny fisian’ny trangan’aretina Coronavirus na Covid 19 eto Madagasikara amin’izao fotoana izao. 23 mars 2020
Raha ny taty an-drenivohi-paritra Diana no resahina dia efa nikoropaka nivoaka naka vola ny ankamaroan’ny olona manana tahiry any amin’ny banky. Nanomboka ny alina taorian’ny fanambaràna, nitohy ny maraina izany dia nilaharana ny fakàna vola. Nilaharana ihany koa ny fividianana fanampenam-bava teny amin’ny fivarotam-panafody.
Azo ambara araka izany fa ny hanangona sakafo no heverina fa nampikoropaka ireo olona naka vola. Nanamarina izany ny fisian’ny olona maro tsy tahaka amin’ny andavanandro niantsena tao Bazarikely.
Nifandrombahan’ny olona ny fividianana ireo voamaina, indrindra ny tsaramaso. Tsy naharaka ny mpividy ny tsaramaso tao Bazarikely satria ahitana izay tsy nahazo satria lany tanteraka izany. Ankoatra izany ny fividianana koba na lafarinina, menaka, vary sy ny maro hafa.
Nandritra izany dia efa maro ny mpanararaotra nampiakatra ny vidin-javatra ireo mpivarotra, ka ny voasary makirana sy tongologasy ary ny sakamalao no tena nahitana fiakarany tampoka. Raha 100Ariary sy 200 Ariary ny toko iray tamin’ ny zoma 20 marsa, dia tafakatra ho 500Ariary na 1000Ariary ny singany iray amin’ny voasarimakirana nanomboka ny sabotsy 21 marsa, maraina.
Nampihazakazaka ny maro ny fividianana izany satria voalaza fa anisany ho fiarovana amin’io aretina malaza ratsy eran-tany io ka nanararaotra ireo mpivarotra izany taty an-toerana.
Ahiana araka izany ny mety hampitohy ny fanararaotana ataon’ireo mpivarotra hampiakatra ny vidin-javatra, ka ilaina fandraisana andraikitra ataon’ireo tompon’ andraikitra tandrify izany aty an-toerana. Tamin’ny fandalovanay tao Bazarikely tamin’io fotoana io dia mbola tsy nahitana mpanara-maso tahaka izay hita tao an-drenivohitra ny taty Antsiranana. Fantatra fa malalaka ara-barotra amin’ny fanaovana ny vidin-javatra ireo mpivarotra fa ilaina ny fandraisana andraikitra amin’ny fanaraha-maso ireo mpanararaotra, indrindra amin’ny vanim-potoana izay azo ambara fa sarotra ho an’ny vahoaka tsy an-kanavaka izao. Hatreto dia mbola tao Bazarikely ihany no nahitana mpanararaotra izany ka ilaina fanaraha-maso ihany koa ireny mpamongady ireny raha sanatria hanararaotra amin’ny fampiakarana ny vidin’entana ilaina amin’ny andavanandro, ka lasa ny vahoaka no misedra ny mafy.
Manoloana ny fahafantarana fa efa misy olona mitondra ny tsimokaretina mandoza ity eto Madagasikara dia ilaina ny fanarahana ny fepetra rehetra amin’ny antsipiriany noraisin’ny fitondram-panjakana ho fiarovana ny ain’ny Malagasy ary ho fifampiarovana amin’ny fampitana vaovao mahakasika izany.
“Misokatra ny zotra nasionaly, hiverina ny sidina mankany ivelany” FEPETRA ARA-PAHASALAMANA (393) 21 septembre 2020 Sarona ilay miaramila mpamatsy basy sy mpiray tendro amin’ny jiolahy ANTSIRANANA (121) 24 septembre 2020 Tsy nandrenesam-peo intsony ny Fitsarana Malagasy RAHARAHA RABEKOTO RAOUL (116) 24 septembre 2020 Maty voatifitra i Sopa mpamaky fasana sy efa nahafaty zandary ANTSALOVA (97) 22 septembre 2020 Potiky ny afo koa ny Sekoly “Notre Dame de Lourdes” MANJAKANDRIANA (90) 21 septembre 2020 Nodimandry teo amin’ny faha-82 taonany Ramahafadrahona ZAVAKANTO (78) 22 septembre 2020